★မြန်မာ့အလင်း★: ကျည်သံမထွက်တဲ့ ကျူးကျော်စစ်
ကုလားတွေဟာ သူတို့မွတ်ဆလင်ဝါဒကို နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ပွားများအောင်လုပ်ဖို့ပဲ အသိရှိပါတယ်။ လူကျင့်ဝတ်ကို သူတို့နားမလည်ပါဘူး။ တဖက်လူကိုလည်း စာနာမှုမရှိပါဘူး။ အခွင့်အရေးမှန်သမျှ အသုံးပြုပြီး မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပါတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့နည်လမ်းမှန်သမျှ တစ်ခုမကျန်အသုံးပြုပြီး မွတ်ဆလင်တွေ တိုးပွားအောင်လုပ်နေပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ. . . မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို လိမ်ညာပြီး မယားငယ်လုပ်နိုင်သူကို ပလီက ဆုငွေပေးပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်.. ဆေးတိုက်ပြီး မယားငယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ရင်လည်း ပလီက ဆုငွေပေးပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အမည်သစ်တီထွင်ပြီး ကုလားတွေ မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်အောင် နိုင်ငံတကာမှ မွတ်ဆလင်တွေကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ အနောက်ဖက်တွေမှာတော့ တရားဝင်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ကုလားတွေကို သွင်းနေပါတယ်။ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ခွေးလို ၀က်လို သားဖေါက်ပြီး လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့ လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားတယ်။ အထက်ကပုံကြည့်ရင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံလို့ အထင်မှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံလို့ အမည်တွင်တဲ့ UK လန်ဒန်မြို့ရှိ Trafalgar Square ပါ။ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ယုတ်ယုတ်ညံ့ညံ့တွေမြင်ရပေမယ့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။
သူတို့နိုင်ငံတွမှာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေ ဆောက်လုပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဘာသာရေးပွဲလမ်းတွေလည်း လုပ်ခွင့် လုံးဝမပေးပါဘူး။ တခြားဘာသာတွေရဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ကျက်သရေတုံး Hijab တွေဝတ်ပြီး လမ်းတွေပေါ်မှာ သွားလာကြပါတယ်။ ပလီအ၀တ်တွေနဲ့လည်း သွားလာကြပါတယ်။ သူတို့ဘုရားရှိခိုးချင်တဲ့နေရာမှာ ရှိခိုးကြပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကတော့ လန်ဒန်မြို့ကြီးပါ။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ တခြားဘာသာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ကုလားတွေကတော့ သူတို့မွတ်ဆလင်ဝါဒကို တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရပါတယ်။ (မွတ်ဆလင်ဘာသာလို့မခေါ်ပဲ မွတ်ဆလင်ဝါဒဟုခေါ်ပါရန်) တကယ်တော့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်တဲ့ အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီး အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားခွင့်ပါ ရရှိနေပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေဟာ ပလီက အသံချဲ့စက်မှ ခွေးအူသံကြီးတွေနဲ့ နှိပ်စက်ခံနေရပါတယ်။ ဆူးလေဘုရားမြေကို အင်္ဂလိပ်အကူအညီနဲ့ လုပြီး ပလီကြီးဆောက်ထားတာ ဒီနေ့အထိမြင်နေရဆဲပါ။ အဲဒါဟာ အိမ်ရှင်မြန်မာတွေရဲ့ ဘာသာနဲ့ လူမျိုးကို အကြီးစားစော်ကားမှုသာဖြစ်တယ်။ အခုဓါတ်ပုံဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုထားတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ ပလီအကြီးကြီးတွေဆောက်ပြီး ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
ကုလားတွေက အခြေအနေပေးပြီဆိုတာနဲ့ မွတ်ဆလင်ဥပဒေကို စတင်ပြီး သုံးဆွဲခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့က ဓါတ်တိုင်မှာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး မွတ်ဆလင်ဥပဒေကို အခုလို စည်းကမ်းမဲ့စွာ စည်းရုံးနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာတော့ တခြားဘာသာဝင်တွေဟာ မတရားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဥပဒေနဲ့နေထိုင်နေရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံUK မှာ မွတ်ဆလင်ဥပဒေကို ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို အလွဲသုံးစားပြုချင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးနေတာ ကုလားတွေပါ။ အဲဒီကောင်တွေမှာ အားနာစိတ်တို့ လူကျင့်ဝတ်တို့ဆိုတာ လုံးလုံးကို မရှိပါ။ သူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိတာက မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ချဲ့ထွင်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုစံနစ်ကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး သူတို့ရဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို နယ်ချဲ့ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုပြီးအမှတ်မမှားပါနဲ့။ ဒီနေ့အထိ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်ကနေ တခြားဘာသာကို ပြောင်းလဲခွင့်မရှိပါဘူး။ ငါ့ဖာသာ allahကို မရှိခိုးရင် မလေးရှားအစိုးရ ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲဆိုပြီး မေးစရာရှိပါတယ်။ မလေးရှားမှတ်ပုံတင်မှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာလို့ ရေးထားရင် ပလီမှန်မှန်တက်ရပါတယ်။ ပလီတက်ဖို့ ပျက်ကွက်ရင် ဒဏ်ငွေဆောင်ရပါတယ်။ သူတို့မွတ်ဆလင် တခြားဘာသာနဲ့ လက်ထပ်ရင် ကလေးကိုပါ အစိုးရက သိမ်းပါတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး မလေးရှားအစိုးရဟာ အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ဟိန္ဒူကျောင်းတွေကို ဖြိုဖျက်နေပါတယ်။ အထက်ကပုံကတော့ လန်ဒန်မှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို အလွဲအသုံးပြုနေတဲ့ ကုလားတွေက မွတ်ဆလင်ဥပဒေကိုဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေတာပါ။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဆိုတာနဲ့ မွတ်ဆလင်ကတော့ အမြဲတန်းပါပြီးသားပဲ။ သတိပြုရန်မှာ . . . မွတ်ဆလင်ကို လူတိုင်းက မုံန်းတီးကြတာမှန်ပါတယ်။ လူအားလုံးက ရွံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကရုံဏ်းဖြစ်ရတာ လူများစုဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံသားတွေက စတင်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်မွတ်ဆလင်လူနည်းစုက ရန်စ စော်ကားမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်သမျှ အဓိကရုဏ်းတိုင်းလည်း သူတို့ကစခဲ့တာပဲ။ အထက်မှာမြင်ရတဲ့ ပုံတွေကတော့ လန်ဒန်မြို့မှာ အိမ်ရှင်အဖြူတွေကို ၀ိုင်းဝန်းပြီး ရိုက်နှက်နေတာပါ။ အိမ်ရှင် မိန်းခလေးတွေကို မုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်ပြီး သတ်ပြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးကို သူတို့ပဲလုပ်ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေ အဲလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီး ရိုက်နှက်မုဒိမ်းကျင့်တာ ကြားဖူးပါသလား?) ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေ၊ ဆေးကျွေးပြီး ဖျက်ဆီးတာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလားတွေ ယုတ်မာမှုကို ထုတ်ဖေါ်ပြောရင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပါတယ်။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးသူအဖြစ် တံဆိပ်တပ်ခံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လူတွေက ကုလားအကြောင်းကို မပြောလိုကြပါဘူး။ ကျုပ်တို့ကိုလည်း နအဖလူတွေလို့ စွပ်စွဲနေတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ခံနေရပြီဆိုရင် သနားအောင် လုပ်တဲ့အကျင့်ရှိပြီး .. . အင်အားရှိလာတာနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအမူအကျင့်ဟာ မိုဟာမက်တစ်ကောင်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ လုံးဝကို ချွတ်စွတ်တူနေပါတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ သူအင်အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ ပေဂံတွေနဲ့ ပြဿနာမဖြစ်အောင် နေဖို့ ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်အားကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဘာသာမတူသူတွေကို သတ်ပြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ပြောင်းလဲပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် UK မှာ မွတ်ဆလင်တွေ အများကြီးပါ။ မွတ်ဆလင် ဥပဒေသုံးခွင့်ရအောင်လဲ လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ သူတို့မိန်းမတွေ ကလေးမွေးနှုံန်းကလဲ ခွေးမကြီးကတောင် လိုက်လို့မမှီပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် UK ဟာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ စိုး၇ိမ်မှုတွေ ရှိလာပါပြီ။
အဲဒါက တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာပဲ ငါတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လဲဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးမျိုးကို မတွေးပါနဲ့တော့. . . . ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် . . . မော်လမြိုင်မြို့မှာ ကုလားတွေအများကြီးပါ။ ရခိုင်မြို့တချို့ဟာ ကုလားမြို့လို့ခေါ်နေရပါပြီ။ အညာ၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်ဆလင်ရွာကြီးတွေ ရှိနေပါပြီ။ နိုင်ငံအနှံ့မှာ ပလီတွေရှိတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေဟာ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်မှုကိုလည်း ခံနေရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကုလားတွေ ဓါးပြတိုက်၊ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်မှုလုပ်တာ မကြာခဏရှိပါတယ်။ တလောတုံးက မန္တာလေးမှာ အသက်မပြည့်သူလေးကို ကုလားတွေ မုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်ပြီး သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (နအဖနဲ့ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ အဲလိုကိစ္စတွေကို သတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်) ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ တနေ့မှာ မွတ်ဆလင်ဝါးမြိုတာ ခံရပါလိမ့်မယ်။ အခုလိုပြောလို့ . . . စိုးရိမ်သွားပြီလား? ကုလားတွေကို ဒေါသထွက်သွားသလား? အပိုတွေလုပ်မနေနဲ့ . . . ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အဲဒါတွေက ခဏပဲဖြစ်တာပါ. . နောက်နေ့ရောက်ရင် မေ့ပျောက်သွားမှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို-နအဖ တံဆိပ်ခွဲပြီး ဆက်လက်လို့ စောင်တင်းပြောရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ရန်ဖြစ်ကြမှာပါ။
မြင့်မြတ်သည့် မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:21 AM